Xaalada Siyaasadeed ee Magaalada Jigjga oo Foolan – Xeernews24
Xaalada Siyaasadeed ee Magaalada Jigjga oo Foolan
Wararka hordhaca ah ee naga soo gaadhi magaalada Jigjga waxay sheegayaan;
Kadib markuu Cabdi Ileey habeenkii xalay ahaa shiriyay golihiisii wasiirada ayuu goaansaday inuu ku dhawaaqo Go,itaan uu ku sheegey in kililka 5aad ee Soomaalida ka go,idoono Itoobiya inteeda kale.
Arintaas jar iska xoornimda markay ogaatay Dawladda Federaalka Itoobay iyaa talaabo ay kaga hortagi ficila fulaynimo ee Cabdi Iley waxayna xarumihii muhiimka ee kililka Ku wareejisay ciidamo fara badan.
Meelaha ay ciidanku waardiyaynayaan waxa ka mid ah madaxtooyada Cabdi Iley Hoolka shirarka baarlamanku ka dhacaan ee Qaryaan Dhoodaan iyo xarunti Beenta,Dhantada,ee ESTV iyo meel kale oo ku yaal dhamaan magaalada Jigjiga.
(kala Socda XeerNews24.com Kolba wixii soo kordha)
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/deg-deg.png 164 307 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-04 09:32:192018-08-04 09:32:19Xaalada Siyaasadeed ee Magaalada Jigjga oo Foolan
Mengistu Hailemariam iyo Desalegn oo kulmay iyo cadho ka dhalatay. Ciidamada Fedaraalka Itoobiya ayaa wareegay xarumihii muhiimka ee Magaalada...